Linn Ko: Mobile ODIN APK For Installing Firmwares,CWM And Kernels ( Can easily Root Access)
Mobile ODIN APK For Installing Firmwares,CWM And Kernels ( Can easily Root Access)
Mobile Odin Pro ကိုအသုံးပြုပြီး မိမိဖုန်းမှာ Firmware တင်မယ် CWM Recovery သွင်းမယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ Mobile Odin ဆိုတဲ့ Application လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ
Application လေးကတော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်မိမိဖုန်းဟာ Root လုပ်ပြီးသားတော့ဖြစ်ရပါမယ်။ပြီးတော့ မိမိဖုန်းဟာ Android version 2.1 နှင့်အထက်ရှိရပါမယ်။ဒီဆော့ဝယ်လေးကို Google Play Store မှာတော့ ဒေါ်လာ$4.99 ဖြင့်ဝယ်ယူအသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပြီး ဒီမှာတော့ Free Download ရယူအသုံးပြုနိူင်ပါသည်။ အောက်ကလင့်ခ်တွင်ရယူနိူင်ပါသည်။
Mobile Odin Pro v.3.65 အားရယူရန်
- Samsung Galaxy Tab 10.1″ GT-P7500
- Samsung Galaxy Tab 10.1″ Wi-Fi GT-P7510
- Samsung Galaxy Tab27″ GT-P3100
- Samsung Galaxy Tab27″ Wi-Fi GT-P3110/P3113
- Samsung Galaxy Tab210″ GT-P5100
- Samsung Galaxy Tab210″ Wi-Fi GT-P5110/P5113
ပြီးလျှင်အပြာရောင်စက်ရုပ်ပုံလေးတက်လာပါမယ်။ ပြီးလျှင် ခေတ္တစောင်. နေလိုက်ပါ mobile odin က auto လုပ်ဆောင်ပေးနေပါလိမ်. မယ်။အားလုံးပြီးသွားလျှင်ဖုန်းက လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကိုအော်တိုအင်စတောလုပ်ပေးနေပါမယ်။Auto Installing ပြီးသွားလျှင်တော့မိမိဖုန်းလေးဟာ Firmware အသစ်ကလေးနဲ့(Rooted)ပါရပြီးလန်းနေပါပြီ။
Credit to: Myanmar Mobile App and AUNG BOBOLWIN (bobolwin36@facebook.com)
Posted by Linn Ko at 11:24 PM